Wednesday July 10, 2019 - 08:29:36 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Sirdoonka Dalka Kenya ayaa sheegay in AL-shabaab ay qorsheynayaan weerarro ay ka geystaan gudaha dalka Kenya.
Weerarka ayaa la sheegayaa in Al-shabaab qaadayaan bilaha July iyo August midkood sida ay sheegeen sirdoonka Kenya oo sheegay in ay heleen xog dhinaca amaanka ah.
Waxaa ay xogtooda ku sheegeen in AL-shabaab ay beegsanayaan goobaha dalxiiska oo ay ku badanyihiin Dadka ajannabiga ah ee u dalxiis taga dalka Kenya.
Sidoo kale sirdoonka ayaa sheegay in AL-shabaab ay gudaha Kenya la galeen walxaha qarxa oo loo adeegsanayo weerarrada ay qorsheynayaan.
Dowladda Kenya ayaa sidan oo kale dhowr jeer uga digtya weerarro ay Al-shabaab ka geystaan dalkeeda,waxaana ay sidoo kale sheegtay in ay ka hor tagtay kuwo kale.
Al-shabaab ayaa afar weerar oo waaweyn ka fulisay Dalka Kenya tan iyo 2011kii markaas oo Ciidamada Kenya ay sharci darro ku soo galeen gudaha Soomaaliya.
Weerarradaas waxaa ay kala ahaayeen weerarkii Swestgate ee 2013kii oo sababay dhimasgada 67 qof, weerarkii Empkatoni ee 2014kii oo sababay dhimashada 64 qof, weerarkii Jaamacadda Gaarisa ee 2015kii oo sabay dhimashada 148 qof iyo weerarkii Dusit D2 ee 2019 oo sababay dhimashada 21 qof sida ay sheegtay dowladda Kenya.